Vavaka hahakivy lehilahy ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
Vavaka famoizam-po amin'ny lehilahy
Raha liana te hahalala a vavaka hahakivy lehilahy, tohizo ny famakiana ity lahatsoratra mahaliana ity dia ho hitanao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao.
1 Inona no atao hoe vavaka famoizam-po amin'ny lehilahy?
2 Ny vavaka famoizam-po amin'ny lehilahy sy ny heriny
Inona no atao hoe vavaka famoizam-po amin'ny lehilahy?
Ny vavaka dia vavaka izay nakarina ho any an-danitra mba hitsaoka, hangataka fanampiana na hisaotra ny zavaboary selestialy sy ny heriny masina hanelanelana ho antsika na an'ny olona iray hafa amin'ny toe-javatra rehetra izay manome toky azy. Tokony horaisina izay masina izay mety indrindra hanampy antsika amin'ny toe-javatra tiantsika hovahana na hiteraka, misy olo-masina tsy tambo isaina azontsika aleha, saingy tsy izy rehetra no manatanteraka asa mitovy na iraka ho an'ny faritra mitovy.
Misy vavaka tsy tambo isaina ary, avy eo, fikambanana tsy tambo isaina manana hery masina izay angatahina hanao izany fangatahana izany. Ny fikambanana tsirairay dia samy manana ny fomba fankalazany ny vavaka, ohatra, ny sapile masina izay Rainay, Arahaba Maria folo ary Voninahitra ho an'ny Ray dia tsy maintsy lazaina rehefa avy namaky ny zava-miafina tsirairay. Tsy mitovy ihany koa ny antony anaovana vavaka, mety ho fahasalamana, fitarihana ara-toekarena, fitarihana ara-panahy na fahendrena.
Misy ny vavaka ho an'ny herin'ny maha-Andriamanitra iray hanelanelana sy hanazava ny lalan'ny olona iray raha irintsika izany. Ohatra, vavaka ho an'ny ankizy mpikomy na be vola.
Misy vavaka iray natao hiteraka famoizam-po amin'ny lehilahy iray, mba hahatsapan'ilay olona voakasiky ny vavaka fa tiany ilay olona mitanisa azy. Ny olo-masina izay fanomezam-pahasoavana toy ny fiarovana, mamatotra, mametafeta ary manjaka amin'ny toe-javatra rehetra eo amin'ny fiainana na olona iray dia i Saint Cipriano.
Fantatra amin'ny heriny masina izy ary ny vavaka adiresy aminy dia natao foana haniriana ny olona hiverina, hitia na hiaraka amin'izay manao ireo vavaka ilaina. Matetika koa izy no mamaha ny toe-javatra sarotra eo amin'ny sehatry ny fitiavana toy ny, ny olan'ny mpivady te hisaraka.
Ny vavaka amin'ny ankapobeny dia mamela ny mpamaky hahatsapa ho voaro sy voaro amin'ny hery mihoatra ny takatra. Izany dia satria rehefa natao ny vavaka, na inona na inona ny tanjony, apetratsika ny finoantsika rehetra fa ny fangatahana ataontsika dia tanteraka izany faran'izay haingana izay manome hery bebe kokoa.
Amin'ny raharahan'i San Cipriano, ny heriny dia afaka manampy antsika amin'ny toe-javatra mila hampandehanana, hanjohy hevitra na hanjakazaka amin'ny toe-javatra iray na olona iray. Anisan'ireo vavaka an'arivony ananan'ity olo-masina ity ny vavaka hahakivy lehilahy. Mety ho liana koa ianao vavaka amin'ny Sakramenta Masina.
Ny vavaka famoizam-po amin'ny lehilahy sy ny heriny
Eto ianao dia afaka mamaky ny vavaka hasandratra mba hahafahan'ny Saint Sipriana mifona ho anao ary afaka manampy anao amin'ny vavaka ataonao, dia avereno lazaina izao manaraka izao:
Amin'ny alàlan'ny herin'i San Cipriano goavambe sy ny herin'ny fanahy 3 izay miambina an'i San Cipriano (ny anarany feno) dia ho avy eo aoriako ankehitriny (ny anaranao feno), ho avy izy mandady sy am-pitiavana, feno fitiavana tanteraka, an'ny mangetaheta ny hiverina eo anilako, hiala tsiny noho ny lainga nataoko tamiko, nangataka ahy tany am-poko ary taty aoriana amin'ny fanambadiana, araka izay haingana indrindra.
Saint Sipra! Esory ara-batana sy ara-pihetseham-po amin'ny (anarany) izay vehivavy mety mahasarika azy na izay mamitaka anao. Asaivo mitady ahy izy anio, amin'izao fotoana izao, maniry mafy ny maha-izy ahy rehetra, mba ho eo anilako.
Enga anie izy hanana ny faharesen-dahatra fa Izaho (ny anaranao feno) ary ho vehivavy tonga lafatra ho azy mandrakariva, hitandrina ahy amin'ny eritreriny amin'ny fotoana rehetra (ny anarany) ary hanana antoka fa tsy afaka, ary tsy afaka miaina tsy misy ahy.
Izay izao na aiza na aiza misy azy, na iza na iza (ny anarany feno), maniry; mahita ahy, henoy aho, moka ny fofoko, manafosafo fatratra ahy, mamihina ahy am-pitiavana, manoroka ahy am-pitiavana, miambina ahy mandritra ny fitsaharako, arovy aho amin'ny fotoana rehetra, arovy aho ho harenao lehibe indrindra, ary tia ahy 24 ora andro mandritra ny andronao manontolo. mandritra ny androm-piainanao.
San Cipriano mahagaga, ataovy izay hahatsiarovako (milaza ny anarany) amiko amin'ny tenany sy ny vatany iray manontolo, faniriana tsy voafehy, satria tsy mbola nahatsapa na hahatsapa vehivavy hafa izy.
Izy irery ihany no tsapany fa ny fitiavany ahy, fa ny tenako ihany no tsy voafehin'ny vatany amin'ny hatsaran-tarehiny rehetra ary milamina sy mahatsapa fandriam-pahalemana fotsiny izy no miaraka amiko.
Misaotra anao tsy manam-petra, Saint Sipra matanjaka sy voatahy, efa niasa tamin'ny fangatahako, noho izany mampanantena ny hivoaka aho, miaraka amin'io finoana io ihany izay nahatonga ahy hanatona anao ary mbola tsapako amin'izao fotoana izao, ny anaranao Saint Sipra! Hataoko izany ho valin'ny tombontsoa lehibe fantatro tamim-pahatokisana tanteraka, omenao ahy ianao, amin'ny alàlan'ny famolavolana sy fanapahana (ny anarany) hamerina azy amiko, amin'ny fitiavana, fitiavana, fahatokiana, fahatakarana, feno fanoloran-tena, tso-po ary mahatoky.
Ny herin'ny vavaka na vavaka dia miankina tanteraka amin'ny finoana ananantsika rehefa manao azy, satria, raha tsy mino ny teny lazaintsika isika dia tsy ho re ny feontsika ary noho izany dia tsy hisy hivoaka hifona ho antsika. Ny tsy fahatakarana fa ny finoantsika dia mpamily manan-danja dia nahatonga ny olona hijanona tsy hino ny fahamasinan'ny Olomasina amin'ny fiheverana fa tsy henoina izy ireo. Aza hadino koa fa ny toerana rehetra dia mety raha hatao vavaka raha mbola mahazo aina isika.
Toy izany koa, fomba iray hafa hanatanterahana ny faniriantsika ny miasa mba hahatanteraka azy ireo, na dia mpiara-miasa goavambe aza ny herin'Andriamanitra, ny hetsika ataontsika ihany koa dia mamaritra izay hitranga sy tsy mitranga eo amin'ny fiainantsika, adidintsika ny mandray hetsika ary manaova zavatra mifanaraka amin'izany.
I Saint Chypre dia handre ny vavaka hahakivy ny lehilahy, raha tsy matoky izahay fa ny fanampianao dia hanome anay fotoana hanakaiky kokoa ny tanjonay.
Ny Biraon'ny Masina Rosario
Vavaka ho an'ny Sakramenta Masina